Emsculpting Muscle Building Machine Manufacturers and suppliers - China Emsculpting Muscle Building Machine Factory
Hifem Electromagnetic Ahụ na-adịghị emetụta ahụ na-akpụzi mọzụlụ na-akpali ahụ na-emegharị ahụ na-eme ka igwe na-ebugharị ebugharị slimming.
N'iji teknụzụ elektrọnik (HIFEM) elebara anya nke ukwuu, Emsculpting Pro na-ebute ngụkọta akwara kacha mma.
mmega ahụ agaghị ekwe omume site na mgbatị ahụ (ma ọ bụ mgbagha afọ ofufo). N'oge ahụ ike afọ ofufo na -agbatị ahụ ike
eriri na -adị jụụ n'etiti mkpali ụjọ ọ bụla. Emsculpting Pro na -ebute mkpali n'oge ọsọ ọsọ nke na ọ naghị
kwe ka oge ezumike dị otu a. Mmanya nke Supramaximal na -ebute mwepụta adrenaline nke ọma, nke na -ebute inten
mechie nzaghachi lipolysis na sel abụba. Mgbe ekpughere ya na mmegharị supramaximal, a na -amanye anụ ahụ ime mgbanwe,
na -azaghachi na imezigharị miri emi nke ihe dị n'ime ya nke na -ebute ụlọ ahụ ike na oke abụba.
Emsculpting Pro na-arụ ọrụ na mpaghara afọ ma na-agbatị ahụ ike ka ọ bụrụ abụba na-ere ọkụ ma na-akpụ ebe a, ọgwụgwọ a nwere ike inyere gị aka melite nkọwa ahụ ike nke ị na-ahụ ugbu a site na mgbatị ahụ gị. Ọ dịkwa mma maka ịbara anụ ahụ isi ike nke afọ gị afọ nke na -agaghị apụ apụ.
New Design 4 na -ejikwa Ngwa EMS Emsculpting Electro Slimming Muscle Stimulation Machine
N'iji teknụzụ elektrọnik-elekwasara anya nke ukwuu lekwasịrị anya, ịkpụ Pro na-ebute nkwekọrịta akwara kachasị elu.
eriri na -adị jụụ n'etiti mkpali ụjọ ọ bụla. sculpting Pro na -ebute mkpali na ọsọ ọsọ nke na ọ naghị eme
Ngwa ems sistemụ igwe ọhụụ na -agwọ ahụ ike mkpali ahụ
Nnukwu ahụ ọkụ elektrọnik na -egosipụta igwe na -eme ka Ultrashape Slimming Ems Muscle Stimulator Machine
Vetikal HIFEM Muscle Stimulation Ems Sculpting Machine
na -azaghachi na imezigharị miri emi nke ihe dị n'ime ya nke na -ebute ụlọ ahụ ike na oke abụba
5000W na -abawanye igwe ahụ Slimming Emsculpting Machine
2021 ihe ọhụrụ na-eme ka ahụ ike na-adịghị emerụ ahụ na-ebelata igwe dị gịrịgịrị
CIRCSLIM Tesla Sculpt Electromagnetic Muscle Slim Mma igwe Circslim